လူပျိုကြီးများနှင့်ပြောမိသောအချစ်အကြောင်း | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » လူပျိုကြီးများနှင့်ပြောမိသောအချစ်အကြောင်း	30
Posted by ဖော့(စ)ထရော့ချာလီ on Jul 6, 2012 in Creative Writing, Think Different | 30 comments
ဖော့(စ)ထရော့ချာလီ has written 84 post in this blog.
View all posts by ဖော့(စ)ထရော့ချာလီ →	Blog
amatmin says: ဂေဇက်ရွာထဲမှ လူပျိုကြီးများအားလုံးကြားစေသတည်း..
pan pan says: ကိုမတ်သည်…..
ရွာသူားများ အဆုံးထိနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် တွေးကြည့်ကြပါကုန် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1130
မှော်ဆရာ says: ဟယ် အဲဂလိုကြီးလား
marblecommet says: ကျုပ်က ကိုမတ်ထက် ရာထူးနည်းနည်းလေး
Mလုလင် says: ကို အမတ်မင်း က ၀န်မန့် သွားမှ တော့ ဘာမှ ၀င် မန့်ချင်တော့ပါဘူးလေ .. ကျွန်တော် တို့ ဆယ်ကျော်သက် မှာတော့ အိမ်က ကလေးတွေ မဖတ်မိ ဖတ်မိ အောင် ပညာပေး စာအုပ် တွေကို စားပွဲပေါ် တင်ပေးထားတတ်တဲ့ ဘိုးတော် ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ ဗျို့  … ကြည့်ရတာ အဲ့ဒီ ခောတ်တုန်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြော ရဲကြလို့ ထင်ရဲ့ ….
Moe Z says: ဟိုလူကြီးကတော့ ပြောတယ် သူ့သားနဲ့သမီးရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ
ကွန်ဒုံးကိုအမြဲထည့်ပေးထားတယ်တဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1459
Mလုလင် says: အားပေးတဲ့ နေရာ လေး တော့လို သဗျာ …။ လိပ် ပညာပေး ဆိုတဲ့နေရာ မှာ လိင် ဆက်ဆံ တာ တစ်ခု ထဲ မက – တခြား ကိစ္စ များ ပါကြောင်းလေး အဲ့ဒါလေးပါ နော့ …။
အရင့်ရောင် says: ဟိုငေးဒီငေး
Wow says: ဒါဆိုအခုခေတ်ကလေးဒွေက ခြံထဲကတိုင်မှာဆင်းပြီး ကွန်ဒုံးစွတ်တဲ့ ခေတ်တော့ မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်…. :D
မွန်မွန် says: ခေတ်ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ ရည်းစားထားဖူးတယ် ဆိုတာနဲ့တင် အပျိုပဲ မစစ်တော့သလိုလို၊ တစ်ခုခုပဲ ဖြစ်ပြီးထားသလိုလိုနဲ့။ မိန်းမကောင်းတွေပါ ရောပြီး နာမည်ပျက်တယ်။ တော်တော်များများက ဒီကိစ္စကို ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လို့ သဘောထားနေကြတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကလည်း ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စကို မလိုက်လျောရင်ပဲ တကယ်မချစ်သလို၊ မိန်းကလေးတွေဘက်ကလည်း ဒီခေတ်ထဲမှာ မဆန်းတော့ဘူးဆိုပြီး လိုက်လျော။ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်က ဟုတ်နေပေမယ့် တကယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့သူတွေပါ ရောယောင်ပြီး နာမည်ပျက်တယ်။
R Ga says: “တိန့်”……. ဒါကြောင့်မို့ အစကတည်း(အဲအခုကတည်းက) ကလေးမွေးရင် မိန်းကလေးမမွေးချင်ဘူးလို့ကျောနေတာပေါ့..။ ဒီလိုပြောလို့ မမ၊ဒေါ်ဒေါ်၊ ညီမများ စိတ်မဆိုးကျလင့်..။မည်သည့်အတွက်မှမဟုတ်။ ( အာဂ ဆိုက်ကို နှင့်အာဂဖြစ်သည်)။ နံပါတ်တစ်အချက် မိန်းကလေးမလိုချင်တာက ။ ဘော်ဒါ တွေ ကြားထဲ (မွေးကတည်းရှုံးလို့ဖြစ်သည်) ဥပမာ တူရ တို့ ၊ တိုမတ် တို့ပေါ့ ။ နောက် ကျွန်တော်က သားမွေးရင် ကျွန်တော့် ရဲ့ ယောက်ျားတို့တတ်သင့်သည့် ပညာ ရပ်တွေ(ဟုတ်ကရော မဟုတ်ကပါပေါ့ဗျာ။ )ကို လက်ပူးလက်ကျပ်သင်ပေးချင်သပ။ မိန်းကလေးဆို ဒီလိုအမွေပေးလို့မှမရတာကိုးဗျ..။ နောက် သားလေးမွေးရင် စိတ်ပူ စရာဆိုလို့ မသကာ အခြောက်ဖြစ်မှက လွဲလို့ကျန်တာတော့ ကျွန်တော်စိတ်မပူရဘူး။ ဥပမာပြောတာပါ။ သားမွေးလို့ ဒင်းဟာ ဒင်း ဘယ်အချိန်ပြန်လာလာ ။ ဘယ်အချုပ်ရောက်ရောက် ဒင်းကို အိမ်ပေါ်က နှင့်ချလိုက်လို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ သမီးလေးများ အဲဒီလိုဆိုးလို့ ရှိရင် ဘယ်နဲ့များလုပ်ရ…ပ..။ ထားပါ… လူပျိုကြီး …တွေအကြောင်း ခေတ်လူငယ်အတွေကြောင်းမန့်နေတာ ဘာကြောင့် ကိုယ့်အကြောင်းရောက်သွားသလဲမသိ..။ သမီးလေး များမွေးရင်တော့ ဘယ်လိုထိမ်းရသရပမလဲ ကျွန်တော်မိဘဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောပါတယ်။..ရင်လေးမိတယ်။ စိတ်ပူမိတယ်။ ခေတ်ကိုက ၀ါးနုက ၀ါးရင် ပတ်သလိုဖြစ်ဖြစ်နေတော့ ..လေ..။
၀မ်းတွင်းရူး says: “”ကဲဗျာ… ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘ၀တုန်းက အချစ်ကိုနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ အပြစ်ကင်းကင်းခံစားတာ… အချစ်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာ”"
ဘဲဥ says: အကျိုးရှိတဲ့ပိုစ့်လေးပါ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ့
ယောက်ျားတစ်ကာနဲ့တွဲလိုတွဲ ပီးမှ လက်သည်ရှာဖို့ငါ့ကိုမေးတယ် ကဲဘယ်လိုလဲတဲ့ ကျန်သေးတယ် ဆိုတဲ့သူတော့မသိတော့ဘူး
ကိုယ့်သားသမီးတွေကျရင် ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးဗျာ …… အဲ့ဒါကြောင့်လူပျိုဂျီးပဲလုပ်တော့မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2542
အလင်းဆက် says: သားက လူပျိုလေး.ပဲ.ရှိသေးတာ ။
AKKO says: ခေတ်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းပဲလား ၊ မီဒီယာကတဆင့်အတုခိုးကောင်းတာလားတော့မသိဘူး ဒီခေတ်ကလေးတွေ အရမ်းလူဖြစ်မြန်ကြတယ် ။ တစ်ခုခုဆိုလည်း သိလိုက်ကြတာချည်းပဲ ။ အဲ့ဒါတွေလုပ်တတ် သွားတတ်မှပဲ ခေတ်မှီတယ် လူရာဝင်နေတယ် ထင်ကြတာ လွဲမှားတဲ့ အတုယူမှုတွေပဲ ။ ခေတ်လူငယ်တွေအတွက်တော့ ရင်လေးတယ်ဗျာ ။
padonmar says: ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ မီးငယ်တို့ အသိကြွယ်ဖို့ စာအုပ်နဲ့ သားငယ်တို့နားလည်ဖို့ စာအုပ် ၂အုပ်ဆောင်ထားပါလို့ လူပျိုကြီးတွေရော လူပျိုမကြီးတကြီးတွေရော။ကြောင်ဝတုတ်လို လူပြိုကြီးတွေရော ပြောပြချင်ပါတယ်။
မောင်ပေ says: ကိုကြောင်ဝတုတ် ရေ
htoosan says: .. တကယ်တော့ ကျွန်တော့် အထင်တော့ လူရယ်လို့ ရှိလာကတည်းက ဒါမျိုးတွေ ရှိလာခဲ့တယ် ထင်တာဘဲ ။ ခုခေတ်နဲ့ကတော့ ပိုပြီးမြင်သာ ထင်သာ ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုး မရှိကြတော့သာ ကွာတယ်ထင်ပါသည် ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 79
သော်ကြီး says: အော် ။ ခေတ်——–ခေတ်———ခေတ်———ခေတ်—–။
ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ says: တစ်ချို့မှာ လူပျိုကြီးများဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကျပြန်တော့လဲ လူပြိုကြီးများ ဖြစ်ကြပြန်သေးသည်။ လူပျိုကြီးဆိုသည်မှာ အမဆိုလျင် ယင်မတောင် မသမ်းဖူးသူများဖြစ်သည်။ (ပြောရလျင် သူတို့တောင် မသမ်းရဲလောက်အောင်ကောင်းသူများဖြစ်သည်။)
ဇောက် ထိုး says: သံချပ်….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 752
Yin Nyine Nway says: ကလေးတွေ သိချက်ကတော့ ပြောချင်ပါဘူးအေ
လတ်လတ် says: ၀ုတ်ဘ ကျနော့် အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုလည်း ကျောင်းပိတ်ရက်ကလေးတွေလာထိုင်ကြတာ
kyeemite says: ကျုပ်တော့မမန့်တော့ဘူးကြောင်ဝတုတ်ရေ…
Nyein Nyein says: ခေတ်အရ ဖြစ်လာတယ်ပဲပြောရမလားတော့ မသိဘူး။ အဲလိုလူငယ်တွေရှိသလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ လူငယ်တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ တစ်ချို့တွေများဆိုရင် ပြုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက်ပါ။ ကျောင်းတက်တုန်းကဆိုရင်လည်း ကျောင်းကားတွေပေါ်မှာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့တွေမရှက်ပေမယ့် အတူတူစီးရတဲ့လူတွေက တကယ် မမြင်ဝံ့တာပါ။ တစ်ချို့ကားတွေဆို ဆရာမတွေပါပေမယ့်လည်း ဂရုမစိုက်တာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ငြိမ်းတို့ကျောင်းက ဆရာမတွေက အပျိုကြီးတွေများတော့ သွားဆူဖို့နေနေသာသာ ရှက်ပြီး အနောက်ဘက်တောင် မလှည့်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ မိန်းကလေးကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမယ်။ ယောင်္ကျားလေးကလည်း ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ရည်းစားကို တန်ဖိုးထားပေးမယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ပေါ်တင်ပြုမူနေတာတွေကို တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
kyeemite says: အကြည်တော် ပြောထားတာလေးဖတ်ဖူးသဗျာ…
etone says: ကိုဖတ်ရေ …. ဒီခေတ်မှာ ကူးစက်မြန်နှုန်းမြင့် ရောဂါတစ်ခုလို လူငယ်တွေအကြား ဒီကိစ္စတွေကူးစက်နေတာ … တားဆီးလို့ကတော့ ရမယ်မထင်ဘူးနော် … ဒီတော့ မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်ရအောင် ၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဒုက္ခမများအောင် … ပညာပေးကို လုပ်ကြရပါမယ် ။
ပညာပေးကိစ္စတွေရှိမှသာ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရမှာလေ … ။ မိဘတွေကတော့ ငါ့သားသမီးလေး ငယ်လွန်းလှတယ် … ဒါမျိုးတွေ မလုပ်တတ်ပါဘူးထင်ချင်ထင်ပြီး ပညာပေးတွေ လုပ်လျှင်တောင် ပညာပေးတွေကြောင့် အဲ့ဒီဘက် အာရုံရောက်တာတွေ ၊ သတိမိတာတွေ ဖြစ်လာတော့မယ်ထင်ပြီး … ပညာပေးကိုကျောင်းသင်္ခန်းစာတွေအထဲ ထည့်သင့်ဖို့မတိုက်တွန်းကြသလို ၊ အားလည်း မပေးကြဘူး ။ ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ တစ်ခါတစ်လေကြလျှင် ….. အရမ်းအတွေးခေါင်ကြတယ် .. မရှက်သင့်တဲ့နေရာမှာရှက်တတ်တော့ … မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ …. ။ လူငယ်ဆိုတာ … ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ အတူ ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားလာကြတယ် … ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာမှ ပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှူတွေ ၊ မြှောက်ပေးတာတွေကြောင့် လက်တည့်စမ်းကြည့်ကြပါရောလား … ။ ဗဟုသုတလည်းမရှိ ၊ ပညာပေးလည်း မသိထားတော့ ..ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ … အိမ်ထောင်ကျတဲ့လူကကျ ၊ လမ်းမှားရောက်တဲ့ လူကရောက်နဲ့ … မိဘအရိပ်အောက်မှာနေရင်းကို .. ပြောင်းကိုဆန်နေကြတာပါပဲ … ။ မိဘနဲ့သားသမီးကြားက ပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကလည်း အရေးပါသေးတယ် ကိုဖတ်ရေ … ။ ကိုယ့်သားသမီး ဟိုတယ်သွားမယ့် ကိစ္စတော့ ဘယ်မိဘကမှ ကြိုမသိပါဘူး .. သားသမီးကလည်း တိုင်ပင်မှာမဟုတ်ဘူး .. ဒါပေမယ် .. မိဘဖြစ်သူကသာ .. သားသမီးမှာ ရည်းစားရှိတယ်ဆိုတာ ကြိုသိလျှင် .. အပြင်မှာတွေ့တဲ့အခါထက် .. အိမ်မှာလာတွေ့ခိုင်းတာမျိုး ၊ တစ်ခုခုသွားမယ်ဆိုလည်း … မိဘကို အသိပေးတာမျိုးနဲ့ …. အရိပ်ခြေအကဲခတ်ထိန်းလို့ ရနိုင်မယ်ထင်တယ် … ။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကိုဖတ်ရေ … သံကွန်ချာနဲ့ အုပ်ထားလို့ ရတဲ့ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ … အရိပ်ကဲကြည့်နေစဉ်အတွင်းရော ၊ ပညာပေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းရော သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေပါ လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးရမယ် … ။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါးဘ၀ ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးရော ၊ နှမသားချင်း စာနာတတ်စေတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးရော ၊ တာဝန်ယူဖြေရှင်းတတ်တဲ့ သတ္တိမျိုးရော …. လူငယ်တွေခေါင်းထဲ သွင်းပေးသင့်ပါတယ် … ။ အို .. အဒူတွေ ဘာပဲ ပြောပြော တို့ကတော့ … ကလေးမမွေးဘူး .. ကြောင်ပဲမွေးမယ် … ဟိဟိ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1708
မွန်မွန် says: ဂယ်လားဟင်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5780
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ကောင်းပါတယ်..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2516
blackchaw says: ဟေး ၀တုတ်…။